अन्यायमा परेका छन् महादेव ! – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २८ श्रावण २०७७, बुधबार १३:५८
‘र यसरी ती सती, जो महादेवकी पत्नी थिइन्,
ती गुणी सती, अन्ततः पुनर्जीवित भएर मेनकाको गर्भमा बसिन्।’
पहिले त महादेवले, ‘सती, हामीलाई त्यहाँ बोलाइएको छैन। नबोलाएको ठाउँमा जानू कुनै स्वाभिमानीको लागि मर्नु समान हुन्छ’ भन्दै रोक्न सक्दो प्रयास गरेका थिए।
महादेवलाई जितेर माइत पुगेकी सतीले पुग्नेबित्तिकै आफ्ना पतिलाई, ‘सन्की’, ‘कुलहीन’, ‘नसामा धुत्त रहने बौलाहा’ भन्दै अपमान गरेको सुन्नपर्‍यो। सती आउन त बाआमाको अँगालो, काख सम्झेर आएकी थिइन्। तर पुगेर जे सुनिन्, त्यसपछि उनका आँखाले त्यो यज्ञ मात्रै देखे जसले अँगालो फैलाएर उनलाई हेरिरहेको थियो।
‘हा सती! हा सती!’ भन्दै उनी होस गुमाएर हिँडे। सतीको लास एक-एक गल्दै एकाउन्न टुक्रामा खसिसक्दा पनि थाहै पाएनन्। त्यो लास शून्य हुन्जेल कति भोकै बसे होलान् उनी! कति पानी नखाई हिँडिरहे होलान्! कति लामो व्रत थियो होला त्यो!
हो, हरेक वर्ष तीजमा महादेवकै पूजा हुन्छ। तर सबैले आफूलाई भोको पेट पुजिरहँदा पनि उनी चाहिँ ‘एकातिर नपाकेको रोटी’ जस्तै अनुहार बनाएर बस्छन् होला।
अफसोच! महादेवको प्रेम, अहिले अनेक नाम गरेका ‘महादेव’ हरूमा बाँच्न पाएन। नारीलाई पार्वतीको प्रेम सिको गर्न तीज छ। तर पुरुषलाई महादेव प्रेमको उत्सव मनाएर सिको गर्न कुनै चाड छैन।
तर को धर्मवादी हो र को धर्मविरोधी भनेर वर्गीकरण गर्ने जागिर खाएकाहरूले एउटा कुरा ख्याल गरेनन्- हाम्रो धर्म ती जागिरे डराए जसरी कसैले विरोध गर्दैमा बर्बाद भइहाल्ने गरी कमजोर छैन। बरु हामीले थोरै बुझाएर, थोरै सिकाएर अनि थोरै सुधारेर विरोध गर्नेलाई ‘वाह’ गर्ने बनाउन सकौं, हाम्रो धर्म त्यति बलियो चाहिँ छ।
तर पार्वतीको प्रेम मनाउँदै श्रीमतीले आफ्नो दीर्घायुका लागि व्रत बस्दा श्रीमानले भनिदिऊन्, ‘म पनि महादेवको प्रेम सम्झेर तिम्रा लागि व्रत बस्छु।’
पार्वतीले महादेव पाउन गरेको तपस्याको सिको गर्दै आफ्नी प्रेमिकाले व्रत बस्दा प्रेमीहरूले भनिदिऊन्, ‘मलाई पनि त तिमीलाई पाउनु त्यतिकै महत्त्व छ। सँगै एकअर्कालाई पाउन व्रत बसौं न!’
हामी अहिले ‘हिन्दु धर्म बचाऊँ’ भन्दै प्रचार गरिरहेका छौं। हाम्रो धर्म कति वैज्ञानिक छ, पश्चिमाको सिको नगरौं भनेर बुझाउन खोज्दै छौं। त्यही बुझाउन खोज्नेहरूले मात्रै पनि श्रीमती-प्रेमिकालाई व्रतमा साथ दिए पुग्छ।
कुनै पुरुषले आफूलाई पूजनीय पति ‘देव’ नसोची श्रीमतीको दुःख बाँड्ने जीवन ‘साथी’ सोचेर धर्म जोगाउन चाहे भने कोही विरोधीले कम्तीमा असमानताका नाममा कहिल्यै तीजको विरोध गर्ने छैनन्।
दुई जीवनसाथीलाई बराबर नमानी एउटालाई भगवान अनि अर्कोलाई दासजसरी अर्थ लगाउँछन् केही। साथीलाई भगवान मानेर उसको खुट्टाको पानी खानू भनेको चिल्ने राता कमिला होलान्। साथीले नसक्दा पनि ‘भोकै बस्’ भनेर कर गर्नू विषालु झार होला। तर एकअर्कालाई गर्ने प्रेमको उत्सव मनाउनू, आफूले गरेको प्रेम देखाउन पाउनू, त्यो रुखमा फलेको स्वादिलो आँप हो। त्यो आँप संसारकै सबभन्दा स्वादिलो फल हो सायद।
अनि जब जब हामी भोकै हुन्छौं तब कोही आउँछ र हामीलाई लोभ्याउँदै भन्छ, ‘तिमीहरूको आँप त कुहिएको छ। लेऊ, यो नयाँ फल खाऊ।’
कमरेडहरूकी ‘दिदी’ चुमकला